Conveyor Akatakura Roller, Conveyor Frame, Head chisimudziso - TongXiang
WE IPAI HIGH QUALITYPRODUCT
TX Roller anomiririra chemhando yepamusoro motorized chisimudziso kubatsira vatengi edu kubatsira akasarudzei chirimwa yavo / yangu / chivako kuti rikurumidze, njodzi uye zvibereko. Nadzurudzo & Accessories: Custom shafting muna 45 # kana 55 # simbi. HE, XT, Taper-Lock kana QD compression hubs. Complete magungano iripo pamwe chisimudziso, bushings, shafting uye mabheyaringi. SBR, Neoprene kana D-LAG vulcanized lagging kubva 6.35mm ukobvu kusvikira 25.4 gobvu kana 25mm paukobvu zvedongo lagging. Conveyor chisimudziso Type: Head ...
TX Roller anomiririra chemhando yepamusoro HDPE chinotenderera kubatsira vatengi edu kubatsira akasarudzei chirimwa yavo / yangu / chivako kuti rikurumidze, njodzi uye zvibereko. HDPE Roller Chazvakanakira: * Non kungatikanganisa, chakanakisisa abrasion kuramba; * Vakareruka kupfuura simbi chinotenderera, refu lifespan; * Ko kushandiswa mune chero Chikumbiro apo simbi rollers anoshandiswa; * Lower atange-up mari pamusoro conveyer Zvifambiso nekuvongwa raita uremu; * Recyclable, magetsi, zvinoderedza vibration; * Lowers rechengetedzo mari ...
TX Roller anomiririra chemhando yepamusoro simbi chinotenderera kubatsira vatengi edu kubatsira akasarudzei chirimwa yavo / yangu / chivako kuti rikurumidze, njodzi uye zvibereko. Tongxiang ndomumwe zvikuru nomukurumbira conveyor chinotenderera vagadziri muna China.We vane makore 38 ruzivo production.We kunge specialized kugadzirwa michina uye kuedza michina kuti zvinovimbisa kuti michina yemhando yepamusoro uye high quality. Steel Roller Chazvakanakira: kwikwidzana mutengo; Triple labyrinth chisimbiso; Custom upfu zvemapuranga. Se ...
Hebei TongXiang Conveyor Machinery Co., Ltd , rakaumbwa muna 1980, uye nyanzvi conveyor michina uye nenhumbi. Kwemakumi emakore ruzivo makatipa yakaoma muitiro nokuti unhu kudzora. Vanopfuura 80 Vashandi muzana vave kushanda mufekitari yedu anopfuura 5 years. Kubvira 2004, Mr.Cui kuwedzera kudare kuti hombe zvinhu nokubikwa uye kuti kambani kukura zvakare. Kunyanya kugadzira Conveyor Roller & Idler, Conveyor Frame & Station, chisimudziso, Impact Bar / Bed nezvimwe zvinoriumba, akadai Rubber Ring, Tube, mugodhi, akatakura chigaro uye Chisimbiso.
Latest Kubva & Blog News
Keywords: Nyowani roller mutengo, nyowani roller chirongwa
Isu TX Roller ichangobva kusaina chibvumirano cheHebei Jizhong Energy Group yepasi pevhu refu refu conveyor bhandi chirongwa. Icho chirongwa chitsva chinotenderera mwedzi wapfuura. Iyo yekufambisa nzvimbo ye1800 metres, kuendesa vhoriyamu ye1000T / h, iine mbiri yekutyaira kifaa. Mamiriro acho pasi mugomba ...
Nekushandisa kushoma, mutengo wesimbi ucharamba uchiderera.
Mutengo wezvivakwa muvhiki ino （5.29.2017-6.2.2017） ichiri pasi pekumanikidzwa pasi, kazhinji iine kumhanya kwe30-70 yuan / ton.Uye mutengo wesimbi mumaketi ekuchamhembe maitiro anokwira panguva diki refu zororo reMutambo weChikepe cheDhiragi. Asi mushure mezororo mutengo wesimbi wakatsvuka ...
Iko kushanda kwesimba kwebhandi rinotakura
Belt conveyor iri tepi sekusimudza uye inotakura masisitimu uye kuburikidza nekuenderera mberi kwekufamba kwebhandi kuendesa, kurodha uye kuburutsa kwekufambisa michina.Compared nedzimwe nzira dzekutakura, ine hombe yekuburitsa kugona, kugona kwakanyanya, kureba kufambisa daro, diki r ...
conveyor chinotenderera inobereka
Roller mabheyaringi vari mabheyaringi kuti kushandisa mvere mabheyaringi akadai vakasiyana mabheyaringi Open chinotenderera akatakura Iyi mhando ndicho mhando chinotenderera kubereka. The rakavhurika kubereka unonziwo sandara kubereka. The kubereka pachayo haina chisimbiso. The chinotenderera ane akaturikidzana wandei zvinhu zvenaironi chinotenderera inobereka chisimbiso R ...
Kugadziriswa kwebhandi rinotakura
Belt Conveyor rudzi rwemishini yekushandisa iyo inoshandiswa kutakura zvinhu zvinoenderana neshoko rekukweshera kutapurirana. Inogona kushandiswa pakufambisa kwekutenderera kana kutakura zvifambiso, uye zviri nyore kwazvo kushandisa uye kushandiswa zvakanyanya mune akasiyana maindasitiri mabhizinesi. Bel ...
Rubber Coated Conveyor Rollers , Plastic Conveyor Rollers , Belt Conveyor Rollers , Ceramic Pulley Lagging , For Conveyor , Conveyor Drum Ceramic Pulley Lagging ,